[13 / 02 / 2020] Sümela Teleferik စီမံကိန်းအတွက် Flash ရှင်းလင်းချက်။	61 Trabzon
[13 / 02 / 2020] EminönüAlibeyköyလမ်းရထားလိုင်းမှာအလုပ်ရပ်သွားပြီလား	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[13 / 02 / 2020] CHP Adana လက်ထောက်Şevkin:“ မက်ထရိုကို Adana ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်စေခဲ့တယ်”	01 Adana
CHP'li Kayışoğluသူ Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားသို့လာမည်။ !
၂၀၂၀ ဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပါလီမန်အထွေထွေညီလာခံ၊ CHP Bursa မှဒုတိယ Nurhayat Altaca Kayışoğluကပြောကြားခဲ့သည်။ Kayışoğluကသူ၏မိန့်ခွန်းတွင်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုအာဏာရှိရန်ဝေဖန်ခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်းတွင်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား CHP Kayışoğlu, Bursa, Bursa [ပို ... ]
Erdogan သည် Channel Istanbul Tender အတွက်နေ့စွဲကိုပေးသည်
Erdoğanသည် Kanal Istanbul တင်ဒါအတွက်သမိုင်းကြောင်းပေးသည် သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanက Istanbul ကွန်ဂရက်စင်တာနှင့် 2018 HIB ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ပြုလုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုတင်ပို့သူများအစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားသည့်အတိုင်းnasıl As Suez သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသည်။ [ပို ... ]
Kanal Istanbul ၏နယ်ပယ်အတွင်းမေးခွန်းထုတ်စရာအရှိဆုံးပြofနာတစ်ခုမှာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိသမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များ၏ကံကြမ္မာဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) လုပ်ငန်းစဉ်၏နယ်ပယ်အတွင်းပြင်ဆင်ထားသောရှေးဟောင်းသုတေသနအစီရင်ခံစာတွင် [ပို ... ]
ÇarşlıÇavuşluတံတားကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
အလုပ်သင်Çavuşluတံတားဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်; မြို့လယ်ခေါင်တွင်ရှိသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်အရေးကြီးသော Kocaeli Metropolitan Municipality သည်စင်တာအပြင်ဘက်ကျေးလက်ဒေသများတွင်နေထိုင်သောပြည်သူများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်စီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်သည်။ ထို့ကြောင့်KörfezÇıraklı၏ခရိုင် [ပို ... ]
mirzmir မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ကİzmirအားကစားလေကြောင်း၏ဗဟိုဖြစ်လာစေရန်အတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ çzmir Metropolitan Municipality မှမြို့တော်ဝန်Tunç Soyer သည်İzmir Aviation Club အသင်း ၀ င်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် [ပို ... ]
DHMİမှ Istanbul အရှုပ်တော်ပုံ Channel
ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင် (DHMİ)၊ Channel Istanbul စီမံကိန်း၊ New Istanbul လေဆိပ်သည်ရေကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပြီဟုဆိုးရွားစွာပြောဆိုခြင်း၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ DHMİ, Kanal Istanbul ၏လေကြောင်းအသွားအလာဝန်ဆောင်မှုများကိုမဆိုဆုံးဖြတ်ချက်အသစ် [ပို ... ]
Konyalar အာရုံစူးစိုက်မှု .. ! Alaaddin Selçukတက္ကသိုလ်ရထားလိုင်းများ
Konyalar အာရုံစူးစိုက်မှု .. ! Alaaddin Selçukတက္ကသိုလ်ရထားလမ်းကြောင်း၊ Konya Metropolitan မြူနီစီပယ်, လမ်းရထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ် Alaaddin-Selcuk တက္ကသိုလ်ရထားဝန်ဆောင်မှုများအကြားနေ့မှစ။ တနင်္ဂနွေ (မနက်ဖြန်) တွင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရထား
ယနေ့သမိုင်းတွင် 22 ဒီဇင်ဘာ 1885 Ottoman အင်ပါယာနှင့် Baron Hirsch တို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးမှအငြင်းပွားမှုများကိုအေးခဲစေခဲ့ပြီး Rumeli မီးရထားကုမ္ပဏီ၏အခွင့်အရေးကို Hirsch အားပေးခဲ့သည်။ ပြည်နယ်ရှယ်ယာများ၏ရှယ်ယာများအတွက်ပြision္ဌာန်းချက် [ပို ... ]